8 Fikradaha Sawirka ee Suuqa lagugu suuqgeynayo | Martech Zone
Sabti, Sebtember 5, 2015 Sabtida, Janaayo 2, 2021 Douglas Karr
Marba mar, waxaan la imaadaa xigasho wanaagsan ama talo kooban oo aan jeclaan lahaa inaan bulshada la wadaago. Halkii aan ku soo qori lahaa, waxaan furayaa Depositphotos codsiga mobilada oo raadso sawir qurux badan. Waxaan ku beeraa anigoo isticmaalaya iPhone-kayga ka dibna ka furaya In ka badan App. 10 daqiiqo gudahood, waxaan hayaa sawir weyn oo dhiirrigelin kara qaar ka mid ah shabakadayada shirkada Instagram. Waa tan tusaale:
Maxay taasi ka leedahay abuurista iibinta shirkadayda? Waxaan ogaaday sanadihii la soo dhaafay in fursadaha iyo macaamiisha ugu waaweyni ay ka soo mareen shabakadeena, ee aysan ahayn inay kor u qaadaan waxa ka jira.
Instagram waa shabakad bulsheed muuqaal ah oo bixisa habab aad u fiican oo lagu furo noloshayda shaqsiyadeed iyo la wadaagga khadka tooska ah. Waxaan dhigay dhammaan noocyada sawirrada - laga bilaabo xafiiskayaga macaamiisheenna, eeyga… iyo haa… xigashooyin dhiirrigelin ah oo u dhexeeya. Ma lihin taageerayaal aad u tiro badan, laakiin waxaan haysannaa koox saaxiibo ah oo jecel oo wadaaga waxaan daabacno.
IyadooHootsuite, waxaan sidoo kale hada jadwal u sameysan karnaa qoraaladayada 'Instagram' si aan u dhageysano dhagaystayaasheena! Jadwalka barnaamijyada cusbooneysiinta ee 'Instagram' ayaa si gaar ah waxtar ugu leh qorsheynta dallacsiinta macaamiisheenna.
Sida Loogu suuq Gareeyo Ganacsigaaga Instagram
Geedka Bulshada diyaarso qoraalkan kooban si uu kaaga caawiyo inaad ka fikirto fikradaha sawirrada iyo fiidiyaha aad la wadaagi karto si aad ugu kobciso wacyigaaga astaantaada iyo inaad xiriir la sameysid bulsho ahaan dhageystayaashaada. Waxay bixiyaan sideed fikradood oo muuqaal ah oo aad uga faa'iideysan karto suuqgeynta meheraddaada barta Instagram:
Tus alaabadaada (ama macaamiishaada!)
Muuji sida alaabadaada loo sameeyo ama adeegyadaada loo bixiyo.
Daaha gadaashiisa ka bax
Tus waxa alaabtaada ama adeegyadaadu ay ku guuleysan karaan
Tus xafiiskaaga iyo shaqaalahaaga
La wadaag dhacdooyinka aad ka qaybgalayso
La wadaag xigashooyin iyo dhiirigelin
U adeegso tartamada si aad u kasbato kuwa raacsan
Dabcan, wadada waxaad xitaa kaxeyn kartaa xoogaa beddelaad adoo adeegsanaya Badhanka Iibsiga ee 'Instagram'!
Shaacinta: Waxaan isticmaalayaa xiriiriyeyaal ku xiran maqaalkan.
Tags: fikradaha sawirkawaxyoonayInstagramsuuq-geynta suuqafiidiyowga instagram